Tenga Isina Mvura Yakapatsanurwa Yakavezwa Sipo Yesitsi Yekunamira Gel - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
Isina mvura Isina kujeka Sculpt Sipo Yeyeki Kugadzira Gel
$10.99 Regular price $25.99
Isina mvura Isina kujeka Sculpt Sipo Yeyeki Kugadzira Gel yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Kudya: eyebrow gel
Muenzaniso Nhamba: BX23
Kubatsirwa: Inogara kwenguva refu, Nyore Kupfeka
Type: Meso Enhancer
Zvishandiso zetsiye: Kugara kwenguva refu kwekusiya tsiye
Feature: Gel eyebrow sipo, Isina mvura tsiye gel, eyebrow Sculpt
Transparent Mhedzisiro: Haisi kukanganisa magadzirirwo Iyo haina ruvara uye yakajeka iyo isingazorerutse eyebrow ruvara uye kukiya iyo ruvara yakasimba neiyo gel, haina keke uye haizoratidze mwenje kana yaoma.
Isina mvura: Isina mvura uye haina ziya ziya uye haina smudge. Kunyangwe pakumhanya uye kushambira. Hapana kutya dikita, isina mvura, ziya-chiratidzo, uye mafuta-chiratidzo.
360 ° Dense Brush Musoro: Iyo yakaoma bhurashi musoro unonyatsobata iyo gel, uye iyo refu bhurasho inogona nyore kukwesha kunze kwakapfava uye kwakaumbwa eyebrow makeup.
Kurumidza Kuomesa: Kurumidza-kuomesa uye kwete kunamatira nekukurumidza-kuomesa fomati kunogona kuumba firimu mushure mekumirira 1 miniti kusvika 2 maminetsi.
Yakachengeteka & Yechisikigo: Ichi chigadzirwa chakagadzirwa nezvinyoro uye zvisinga gumbure zvinhu. Iyo yese-yechisikigo uye yakasikwa fomula yakagadzirirwa zvakananga kubhurawuza. Izvo hazvizokonzere kutsamwa, kana kusiya zvisirizvo zvisingadiwe pamabhurawuza ako.
Nhanho 1: Kumashure-muzinga brow ne spoolie kuti tame uye rega iome kwemasekondi makumi maviri. Kana iwe uchida kuti iite kuti ikurumidze kuoma unogona kushandisa chigunwe chako kuchidzvanya.
Nhanho yechipiri: Bhura bvudzi kumusoro kubva pamudzi kusvika kuchikamu chidiki neBANXEER Brow Glue uye wapedza
Ndatenda, zvese zvauya, ikozvino tichaedza.
Zvese zvakanaka! Wakauya pakutanga pane zvaitarisirwa! Ndatenda!
Yakanga yakarongedzwa zvakanaka, padiki pane hwema hweglue, zvakanaka, saka tsiye dzinongova moto chete. Iko kune kwakashata: mushure mekuisa iwo magels, tsiye dzakapusa zvakanyanya kusimbiswa zvekuti kana iwe uchizora tsiye mushure megels, izvo chena zvinhu zvinobviswa. Uye saka zvakanaka).
Iyo gel yakajairwa, kurongedza kwakanaka. Zvizoro mune ino chitoro mhando. Fixation iri pakati, ine zvishoma Pearl particles